Sababaha ka mid ah formatting drive ah
Waxaa jira tobanaan kun oo sababo la xidhiidha qaybaha nidaamka hardware iyo software-ka iyo sidoo kale in la hubiyo in flash aan la formatted oo keliya, laakiin habka la xiriira ayaa waxaa sidoo kale soo qaaday si loo hubiyo in qofka uu helo natiijada ugu wanaagsan ee kiiska qaladaad iyo xogta la xiriira arrimaha ku saabsan drive Waxaa la arkay in inta badan dadka isticmaala hawlaha qaab la xiriira gacanta ugu horeysay oo gebi ahaanba waa mid khaldan, sababtoo ah formatting ayaa abuurtay si ay u hubiyaan in loo isticmaalaa sidii xalka ugu dambeeya si ay u fuliyaan hubiyo in arrinta la xalin. Waa in aan marnaba la fuliyay in meesha ugu horeysa oo sabab la mid ah tutorial tani ayaa loo sameeyey si loo hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah geedi socodka tahay in la xiriira formatting iyo haddii la sameeyo iyada oo aan gurmad xogta ka dibna qalabka la xiriira ayaa sidoo kale loo isticmaalaa in la hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay in arrintan la xiriira ka. Geedi in halkan lagu waa mid aad u fudud in la raaco iyo user waa in la hubiyo in natiijooyinka ugu fiican waxaa laga heli by iyagoo raacaya, sida ay u la soo sheegnay sameeyo. Hoos waxaa ku qoran qaar ka mid ah sababaha oo drive la formatted:
• Xogta kharribeen
• USB aan la aqoonsan yahay
• isticmaalka waqtiga First
• USB ku cad nidaamka laakiin ma ogolaan uusan furin
• drive ayaa saameeyey virus iyo malwares.
Formatting drive ah
Formatting drive hr marna waa arrin gebi ahaan iyo user xaqa u baahan yahay si loo hubiyo in hannaanka saxda ah waa la fuliyay arrintan la xiriira. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la geeyo ee ka dhisay qalabka nidaamka si ay u qabtaan shaqada iyo waa in aan marnaba la sameeyo qaar ka mid ah barnaamijyada software xisbiga saddexaad sida ay u nugul yihiin in ay tanaasul iyo sidoo kale keydin karaa xogta iyo waxa gudbiyaan ka badan internet taas oo macnaheedu yahay dillaac gaarka ah iyo inay halis ku weyn kordhiyo. User ahayd waxay haddaba ku tiirsan yihiin in waxyaabaha waxaa bixiya Microsoft ama OS ku jirta isticmaalka si loo hubiyo in gobolka natiijooyinka tahay waxaa lagu helay. Geedi socodka waa in la raaco arrintan la xiriira waa sidan soo socota oo waa u fududahay mar toogasho ah:
1. Ka dib galinta drive USB in ay dekedda user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in computer aan la furay iyo USB waxaa xaq u riixi in ay hesho fursada qaabka:
2. Marka doorasho qaabka loo doortay ay tahay in la xuso in user waa in la hubiyo in sanduuqa cusub wadahadal halkaas oo fursado la doonayo waxaa lagu soo xulay si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican sameeyo:
3. button tahay ayaa markaas waa in la sii adkeeyey iyo user waa in ay sugaan ilaa bar la dhamaystiro iyo waa in la ogaadaa in waxa ay sidoo kale buuxin doona habka loo user ee buuxa oo ay tahay in la xuso in user wuxuu hubinayaa in in geeddi-socodka lagu soo celiyey in kiisaska oo dhan si loo hubiyo in ugu fiican ayaa loo soo bandhigay in nidaamka iyo sidoo kale drive ee maamulka.
Sida loo unformat flash ah
Waxaa jira barnaamijyo badan oo online sidoo kale offline in loo isticmaali karo si loo soo celiyo xogta ayaa la waayay formatting. Barnaamijyada online marnaba lagula talinayaa in arrintan la xiriira sida ay yihiin ma aha oo kaliya ammaanka cayayaanka khatar ku ah, laakiin waxay sidoo kale badbaadin karo xogta nuqul ka si ay u gudbiyaan internet-ka. Waxaa sidoo kale in la xuso in barnaamijyada offline oo dhan ma trustable arrintan la xiriira iyo user waa in la hubiyo in ugu fiican iyo kan gobolka ee barnaamijka fanka loo isticmaalo sameeyo. Wondershare Data Recovery waa barnaamij ka mid ah in loo isticmaali karo si loo hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan ee arrintan la xiriira. Waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka barnaamijyada farshaxanka oo loo isticmaali waa in la hubiyo in user helo adeegyada ugu fiican unformatting aan ka kaaftoomi kasta iyo haddii uu jiro waqti soo socda user helo barnaamijka si loo hubiyo in wixii kaloo u eego xogta dib u soo celinta waxaa loo sameeyaa. Geedi socodka la xiriira sidoo kale waa mid aad u fudud in la raaco iyo user wuxuu hubinayaa in in la raacay si buuxda aan gefo talaabo kasta oo si fiican oo gobolka ka mid ah natiijada farshaxanka waxaa lagu helay oo aan wax arrin ama dhibaato iyo wixii kaloo la sameeyeen si deg deg ah.
1. URL ayaa http://www.wondershare.com/data-recovery/guide.html waa in la adeegsadaa si loo hubiyo in user helo barnaamij software bixi oo lagu rakibay oo aan wax arrin oo dhib sida uu yahay link rasmiga ah ee barnaamijka ayaa la dhigay Wondershare website-ka rasmiga ah:
2. nooca file ayaa markaas waa in la soo xulay si ay u hubiyaan in user helo geeddi-socodka dhaqdhaqaaqa oo aan wax arrintan iyo dhibaatada:
3. Meesha ie drive USB ah ka dibna waa in loo xulan scan si raadinta dhibic pin la sameeyay arrintan la xiriira:
4. Marka file ah ayaa la helay, waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in kuwa ugu wanaagsan waxaa soo xulay oo dib loo soo celiyo iyadoo la isticmaalayo soo kabsado button:
Waxyaabaha aad aragto hor formatting / unformatting flash ah
Waxaa jira waxyaabo badan oo in la xuso in ka hor inta drive la formatted oo ka mid ah caafimaadka drive, haddii khasaare xogta barnaamijka dib u soo kabashada waa su'aal iyo user waa in sidoo kale la hubiyo in qalabka haddii ay saameeyeen furin ama virus si toos ah formatted yahay dib u dhac kasta oo aan
Liiska barnaamijyada in ay tahay in la soo celiyo waa in la cusboonaysiiyaa oo user waa in la hubiyo in natiijooyinka ugu fiican waxaa bixiya doorashada gobolka ee barnaamijka tahay marka ay timaado unformatting sameeyo. Waxaa sidoo kale kula taliyay in ay doortaan files waxaa looga baahan yahay in mar dib u soo kabashada marka la dhamaystiro.
Sidee inuu ka soo kabsado Faylal ay ka formatted Flash Drive
Sidee inuu ka soo kabsado Faylal ay ka sare maraan Flash Drive
> Resource > Flash Drive > siyaabo Best in qaab iyo unformat aad flash drive